Izindlela Zokuqalisa Zikukhokhisa Kanjani Ukwethulwa Kwazo Ekuzingelweni Komkhiqizo | Martech Zone
Inqubo yokwethulwa kokuqalisa kunoma iyiphi imboni isemhlabeni wonke: qhamuka nombono omuhle, yenze uhlobo lwedemo yayo ukubukisa, ukuheha abanye abatshalizimali bese uzuza uma usufike emakethe ngomkhiqizo ophelile. Vele, njengoba izimboni ziguqukile, kanjalo namathuluzi. Kuyinhloso yazo zonke izizukulwane ukuthola indlela entsha yokuqalisa ukuqala esweni lomphakathi.
Izikhathi zangaphambilini bezithembele kubathengisi bendlu ngendlu, ukuthumela imiyalezo kanye nezikhangiso ze-TV nezomsakazo ukwethula umkhiqizo. Ngenkathi amanye alawo mathuluzi esesekhona nanamuhla, i-twist yesimanje iyadingeka ngokuphelele ukuze ukuqala kwanamuhla kukwazi ukuthola indawo emakethe ematasa.
Engxoxweni yango-2016 no-Alex Turnbull kaGroove, umsunguli we-Product Hunt kanye ne-CEO uRyan Hoover uchaze ifilosofi yakhe, ayishiya kuyise: Thola umgodi, uwugcwalise
UHoover uthole umgodi omkhulu weza nendlela yokuwugcwalisa. Indawo yokuhlangana yalabo abaneziqalo ezingaba khona, isiza sincike emazwini omlomo ukuqinisa noma ukwenza buthaka amacala ngamanye ngokukhuphula noma ukuvotela phansi kubasebenzisi. Uma ungathola amavoti akwanele ukususa okuphakelayo okuzayo, lapho konke ukuqala kuqala, uzodlulela ekhasini langaphambili lesayithi naku-Featured feed.
Ububanzi bemikhiqizo enikezwayo bugcwele yonke indawo. Ochwepheshe bazojabulela izinhlelo zokusebenza zefoni nezamaselula, ngenkathi izincwadi nezinye izinto zitholakalela ukucatshangelwa. Ngisho nalapho Ship Izitha Zakho Ziyakhazimula kwaqala futhi. Kungakapheli amahora angama-24 ukwethulwa kwewebhusayithi kushaya imithombo yezokuxhumana, inzalo iphoqe umakhi ukuthi ayibeke le webhusayithi kuthengiswa.
Isayithi lincamela ukufaka iziqalo 'ezintsha' - hhayi imizamo evela kubathuthukisi bokuqala, kepha izinto ezivuselelwe kakhulu kusuka ezinkampanini ezaziwayo. Futhi bavumela abadali abanezinto ezingaziwa kakhulu ukuthi bathumele ukuqala kwazo, noma ngabe into leyo ingeyona entsha ngobuchwepheshe.
Izinhlelo zokusebenza eziphinde zakhishwa kabusha zingafaneleka ukufakwa kuhlu. Uma ungumbhali ngokwengeziwe, ukuHuntwa koMkhiqizo kungenzeka kungabi okwakho, njengoba isayithi lingazamukeli izindatshana nokuthunyelwe kubhulogi. Izinsizakalo zenkontileka nazo azemukelwa kusayithi.
Kufakazelwe ukuthi kuphumelele kahle, cishe Abalandeli be-170,000 ku-Facebook naku-Twitter kusukela ngoMeyi odlule kanye namaphrofayili ayisishiyagalombili we-Twitter.
Usazizwa ukhungathekile? Sinamathiphu wokuqinisekisa ukuthi isipiliyoni sakho se-Hunt Product sihle kakhulu:
Sesha Imikhiqizo efanayo
Lesi isinyathelo sokuqala ongeke weqe ngaphambi kokuhlela noma ikuphi ukwethulwa ku-Product Hunt, ikakhulukazi uma uyi-poster rookie. Ukuzinika isikhathi sokucwaninga nokuthola ukuthi ezinye izinkampani nabantu ngabanye bawuthengisa kanjani umsebenzi wabo, kuze kufike emigqeni yamathegi, kuyisiqalo esibalulekile. Qaphela leyo migqa yokubamba, kepha ungakhohlwa ukuthi bawenze kanjani amakhasi abo okufika. Yonke into kufanele ibhekwe ngaphambi kokuthatha i-leap, njengoba ukuzikhiphela ngaphandle kuzophela enhlekeleleni. Hlakanipha.
Lapho inkampani yami izama ukwethula ku-Product Hunt besineminyaka engaba ngu-4 ubudala futhi sisungulwe. Sizame konke okusemandleni ukufundisa abasebenzisi ukuthi iselula yethu ye-DIY umakhi wohlelo lokusebenza bekuyinsizakalo enhle kepha ubusha bayo bungeyona into entsha ngokuphelele buholela ekutheni singabi nokwethulwa okuyimpumelelo. Ngakho-ke, iphuzu eliyisihluthulelo lapha, qiniseka ukuthi wethula okuthile okusha hhayi okuthile okuvele kufakwe ku-Product Hunt ngaphambi kokuthi kube nemiphumela emihle.
Kuhle ukufunda emaphutheni akho. Kungcono ufunde emaphutheni abanye abantu. UWarren Buffett
Thola Abathonya Bakho
Enye indlela eya empumelelweni kuwebhusayithi ukuthola abathonya - abantu abangathola intshisekelo ekuqaleni okusha okusanda kuthunyelwa kusayithi. Kujwayelekile kulabo abaxhumene nenkampani ecindezela ukuqala ukudubula ama-imeyili kubasebenzi babo ukubenza bajabule ngenhloso yokuvotela umkhiqizo omusha. Kubantu ngabanye, kulungile ukwenza okufanayo namalungu omndeni nabangane. (Noma u-anti wakho engayazi kahle i-imeyili. Wonke amavoti ayabalwa, khumbula.)
Kunemikhawulo, noma kunjalo. I-Product Hunt ayivumeli izinkampani ukuthi zimane zithenge indawo ekhasini lasekhaya lesayithi. Akunandaba ukuthi irekhodi lethrekhi lihle kanjani, kusamele bathole izinga eliphakeme ngamavoti aphezulu njengawo wonke umuntu.
Gcina Ijubane Engqondweni Lapho Wakha Okuthile Kwesayithi
Ngokungafani namawebhusayithi afanayo, i-algorithm yomkhiqizo wokuzingela iya ngejubane. Ngokushesha nje lapho iwashi lesiza lishaya phakathi kwamabili i-PST, usuku olusha luyaqala futhi ama-top-voti aphezulu nsuku zonke ayasuswa. Ngakho-ke, kubalulekile kulabo bathuthukisi ukuthi baqiniseke ukuthi yonke into isethiwe futhi isilungile uma umkhiqizo usuthunyelwe futhi usemuseni wabasebenzisi. Njengoba i-Product Hunt ingakuvumeli ukuphindiselwa kabusha ngaphandle kokuthi ezimweni ezithile (kuphawulwe ngenhla), lolo suku olulodwa lunquma ukuthi ukuqala kwakho kuyaphumelela noma kwehluleka.
Ukubuyekezwa Komsebenzisi Kungasetshenziselwa Inzuzo Yakho
Abathuthukisi be-Smart nabaqambi basebenzisa izibuyekezo ukubuyekeza umkhiqizo. Abaqambi batshele izindaba zokuthi inguqulo ye-beta yohlelo lwabo lwefoni ithuthukiswe kanjani ngokufunda imibono kusayithi nokulungisa izimbungulu. Ikhasi le-FAQ le-Product Hunt ligcizelela ukuthi uhlelo lokusebenza lungaphindiselwa emuva kuphela uma izibuyekezo 'zinamandla' - izici ezintsha ezibaluleke kakhulu esikhundleni se-tweak lapha noma laphaya. Abaphathi bomphakathi bazokwenqaba izibuyekezo ezincane, ngakho-ke gcina lokho engqondweni.
Izibonelo zezici ezamukelwe zisebenzisa i-gamut kusuka ku-interface eyandisiwe kuya ekutholakaleni okwandayo kuzingxenyekazi eziningi, mhlawumbe inguqulo entsha yeselula yewebhusayithi. Ngisho nelogo entsha iyabalwa!
Bheka nje I-Minibox. Uhlelo lokusebenza lokwabelana ngamafayela njengamanje sekuyiminyaka emibili luyi-iteration yalo yesithathu, nge izinhlobo eziningi zamapulatifomu ahlukahlukene ngemuva kokwethula njengengxenyekazi ye-Mac kuphela.
Hlela Isikhathi Sakho Ngokufanele
Abaphathi bewebhu abahlakaniphile bazokwenza isiqiniseko sokulungiselela ukwethulwa kwento ngendlela efanele. Izindaba ezethusayo zokuqalisa ezingalungiselelwa ispiki kuthrafikhi ngenxa yokuthumela ku-Product Hunt zivamile, njengonjiniyela we-Ship Your Enemies Glitter egcwala izintshisekelo zomphakathi.
Qiniseka ukuthi lapho uhlela ukwethula, konke kusethwe ngendlela othanda ngayo. Uma ungalungele futhi uzoba ngabasebenzisi unenkinga ngohlelo lokusebenza, lungela ukuthola amavoti amaningi akhomba izimbungulu nokubamba ngakwesokunxele nangakwesokudla. Lapho-ke isiphetho sohlelo lokusebenza sizoba sezandleni zabaphathi bomphakathi besayithi lapho ubathumela i-imeyili ngohlobo oluthuthukisiwe.
Abaphathi badinga ukwazi ngayo yonke into oyihlelele ku-Version 2.0 ukuze unikeze okulungile ukuphinda uncike. Qiniseka ukuthi ulungele izibonelo.
Musa Ukuzihambela Wedwa Ngaphandle Kokuxhumana Nabezindaba
Abasebenzisi be-Veteran Product Hunt bajwayele ukuqala ukuqala, futhi banabo oxhumana nabo kwabezindaba abasiza ngokukhangisa. Lokho akusho ukuthi awukwazi ukubalingisa. Yazi noma yimaphi ama-blogger noma izintatheli ezimboze umkhiqizo wakho wakudala ngezibuyekezo ezinhle? Bhalela i-imeyili ukuze unake mayelana nokwethulwa okusha bese ubathumela ngosuku lokuqalisa.
Imilayezo ingazenzekela ngisho nokonga isikhathi esithile kulokho okufanele kube usuku olumatasa. Kuyindlela elula yokuqalisa kwakho okusha phambi kwama-eyeballs amaningi ngokumbozwa okuhle, futhi uthole amavoti amaningi ngaleyo ndlela.
Imicabango Yokugcina Neseluleko
Ukugcina konke lokhu engqondweni kuningi okufanele kubhekelwe noma ngubani, ingasaphathwa eye-Product Hunt rookie. Uma usukulungele, ukubhekana nanoma yini abasebenzisi abakujikijela yona kuyisifinyezo. Uphoqelelwe ukuthi uphinde usebenze ngemuva kokwethulwa okukhulu? Akunankinga, ake sidlulisele izibuyekezo kumphathi wethu womphakathi. Awulungele intshisekelo enkulu kunokulindelekile? Isifundo esifundelwe ngokuzayo. Ngemuva kwakho konke, abasebenzisi abahlakaniphile bafunda kuma-hiccups namaphutha ukuthi babe ngcono ngokuzayo ngokuzayo. Kuwufanele umzamo.
Lezi zibonelo, ezinhle nezimbi, zikhombisa ukuthi kungaba namandla amakhulu kangakanani ekuzingeleni umkhiqizo. Noma yimuphi umthuthukisi ofuna ukuqala ukuqala uzobe enza kahle uma ebheka inani elinikezwa isayithi. Ukwethulwa komkhiqizo okulula kungaba isisekelo sempumelelo yenkampani. Uma usukulungele futhi ukulungele ukuhamba, izinzuzo ze-Product Hunt zingezakho ukuba uzijabulele. Ngikufisela inhlanhla!
Tags: umakhi wohlelo lokusebenzaQalisaibhokisi elincaneukuzingelwa komkhiqizoukuqaliswa komkhiqizoumkhiqizoqalisaukukhushulwa kokuqalisa